MwariTools - Kubatsira Iwe Kugovera Zvaunotenda
Iva Nekutenda Kwako
Heino izvo zvaunowana muApp
Yakabatanidzwa mumushandisi iyi yakasiyana-siyana yekuona zvishandiso zvinobatsira iwe kugoverana kutenda kwako mune chero mamiriro ezvinhu. Sarudza imwe kubva pane zvaunofarira uye munhu waanogovana naye. Iwe unogona kuwedzera kana kubvisa zvishandiso kuitira kuti iwe unofarira iwe uri paimba yenyu yekunze.
Kuziva Mwari Pachake:
Iva nemuenzaniso wakaratidzwa pamusoro pekuziva Mwari pachako.
Ziva Mwari Iwe pachako:
Wana mazano mana ekupinda muhukama hwehukama naMwari.
Mitemo mina yeMweya:
Wana tsanangudzo yakajeka yekukoka kwaMwari kuna avo vasati vaMuzive.
Wana mazano anobatsira pamusoro pokuti ungaziva sei nekuwana Mweya Mutsvene muhupenyu hwako hwechiKristu.
Tora vhangeri kubva kune rukudzo-kunyadziswa kuona.
Dzidza mharidzo yepamusoro yeBhaibheri yakatsanangurwa kuburikidza nezviratidzo zvina.
Tora MwariTools Nhasi!
MwariTools inogona kubatsira chero nguva, chero nzvimbo, uye mumitauro yakawanda. MwariTools anokugadzirira kuti utaure nechivimbo nevamwe pamusoro pekuti vanogona sei kutanga uye kukura ukama hwavo naMwari ... kunyange kana usina kumbogoverana kutenda kwako kare.
60 + Languages
Nebhokisi rinosungirirwa iwe unogona kushandura nyore nyore pakati pemutauro wemoyo wako neavo.
Sarudza chigadzirwa uye uzive nayo. Nyengeterera Mwari kuti azarurire mukana wemukana. Shandisa imwe yezvinyorwa zvekushandura mibvunzo yakawanikwa shure kwebhokisi remashoko pane imwe neimwe yekutangira kukurukura. Ingoverenga zvinyorwa zvese uye uchengetedze hurukuro iri pamusoro paJesu.
Ndinoshandura sei mutauro wangu sarudzo?
Shandisa zviratidzo zvemitauro yakasiyana-siyana pamusana pekamuri remusha kana kupinda mumhuri yemhuri pane kona yepamusoro yekona.
Ndinoziva sei kuti chii chinowanikwa mumutauro wangu wekutanga?
Isa mutauro wako wekutanga. Mazita ezvishandiso zviripo mumutauro wako zvicharatidzwa mumutauro wako. Izvo zvisipo ndeyeChirungu. Iwe unogonawo kuwana ruzivo rwemutauro unowanika kuburikidza nekufambisa ichinoti chiratidzo pane imwe nhumbi.
Ndinoziva sei kuti chii chinowanikwa mumutauro wangu wakafanana?
Chokutanga, sarudza mutauro wako wakafanana unoshandisa mutauro wemenu. Kuwanikwa kweshoko rako rakafanana kunoratidzwa kune kodzero yemusoro wechinhu chimwe nechimwe. Kana mutauro wako usingaoneki, ipapo chimbo hachiwanikwi mumutauro iwoyo. Iwe unogonawo kuwana ruzivo rwemutauro unowanika kuburikidza nekufambisa ichinoti chiratidzo pane imwe nhumbi.
Ndakawana kukanganisa, ndinoitei?
Regai tizive pa Support@godtoolsapp.com
Ndinokumbira sei mutauro kuwedzerwa?
Titumirei chikumbiro chako pane support@godtoolsapp.com
Ndiudze zvakawanda pamusoro pekunyora maimeri pamunamato wekunamatira.
Mune mimwe mitauro, iwe uchapiwa sarudzo yekunyora kutevera shure kwekuratidza chisarudzo chaKristu. Izvi zvinonyorera zviri nyore kukuendesa kune imwe huru ye7 chikamu chema email New Growth series iyo yakagadzirirwa pa Mail Mail kana basa rakadaro. Hazvikumanikidze kune chero kupi zvako kuzvipira. Iwe unogona kuzvisunungura chero nguva.
Unoziva nezvemamwe mapurogiramu anobatsira kundigovera kutenda kwangu here?
Edza izvi mamwe mabasa: Voke, Soularium, Pfungwa, EveryStudent, JesusFilm.
Pane webhanduro yewebhu here?
Knowgod.com Iyo webhusaiti ine zvinyorwa zvakafanana muwebhu yefomu. Knowgod.com inogona kuiswa mukati mako webhusaiti.
Ndezvipi zvakasiyana pamusoro pekushandisa imwe neimwe?
Shandisa ibhokisi rekuziva pasi nechokurudyi chechimwe nechimwe chekuzarura tsanangudzo pfupi.
Iyi purogiramu inotora nzvimbo yakawandisa pane foni yangu. Chii chandingaita?
Kana iwe wakakanda mitauro yakawanda, mhinduro yakanakisisa ndeyekubvisa purogiramu yacho uye kuidzorera zvakare zvakare.
Pane kupi nekudzidzira kwezvigadzirwa izvi?
Heano mamwe mazano anobatsira:
Zvinyorwa pamusoro pekutaurira kutenda kwako
Nzira yekugovana nayo zivo yaMwari
Sei ndichida mutauro wakafanana?
Rurimi rwakafanana runokubvumira kushandura pakati pemitauro panguva yemuenzaniso kana munhu wauri kugovana achitaura mutauro wakasiyana. Rurimi rwakafanana runofanira kusarudzwa kuitira kushandisa sarudzo iyi.
"Tinotenda kwazvo kuva neApp pamashare edu uye tinokwanisa kuikanda kunze chero mutauro watinoda, chero Mwari paanovhura mukova wokugovera mumwe munhu!"
"Ndinoonga nekuita kuti zvive nyore kugoverana vhangeri neumwe munhu anotaura mutauro wakasiyana."
"Ndinovonga Mwari Tools app, ndinonzwa sokuti ndaikwanisa kupedza maawa akawanda ekuve mudzidzi nekuparidza evhangeri mumaminitsi e20 uye kumusiya nezvose zvaaida kuti azivise Kristu asingatyi pamusasa wake."
Yakavakirwa iwe, nesu.
zita Please kupinda zita renyu.
enamel Isa musoro mail.
Message Your Please kupinda shoko.
Message akakundikana. Edzai zvakare.
Ndinotenda shoko renyu! Tichazotaura kuva murove nokukurumidza.
Isa iri pawebsite yako
Neine mutsara pfupi wekodhi, unogona kuva nehuniro hwevhangeri zvakajeka pa blog yako kana webhusaiti.
Ingofananidza imwe yemigwagwa yeikorodhe iri pasi uye isa pasi pawebsite yako.
Kuziva Mwari Pamwe
Mimwe Mitemo ineMweya
Shandisa MwariTools neshamwari!